नारायणकाजी र वामदेवको पराजयः वाम एकताका लागि फुर्सद ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
नारायणकाजी र वामदेवको पराजयः वाम एकताका लागि फुर्सद !
२४ मंसिर, काठमाडौं । यो एउटा संयोगमात्र पनि हुन सक्छ,तर एमाले माओवादी गठबन्धनका दुई प्रमुख सूत्रधार बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले वामपन्थीको माहौल छाएको बेला पनि चुनाव जित्न सकेनन् । निकै सुरक्षित ठानिएको क्षेत्रमा बामदेव गौतम पराजित भए भने,बाबुराम भट्टराईलाई गठबन्धनबाटै बाहिर पठाएर आफूले रोजेको क्षेत्रमा गएका नारायणकाजी पनि जित्न सकेनन् ।
बामदेव गौतम र नारायणकाजी लामो समयदेखि एमाले माओवादी एकताको पक्षमा क्रियाशील थिए । दुई पार्टीका शीर्ष तहमा पानी बाराबारको स्थिति हुँदा पनि बामदेव र नारायणकाजी सधैं एक अर्को पार्टीका शीर्ष नेतासँग संवादमा हुने गर्थे । अहिलेको बाम गठबन्धनका सूत्रधार थिए दुवै नेता ।
देशैभरि वामपन्थी गठबन्धनका उम्मेदवारले दुई तिहाईको संख्यामा चुनाव जितिरहेका बेला यी दुई बरिष्ठ नेताको ‘नसिब’मा पराजय हात लाग्यो । यसलाई एमाले समर्थक रामेछाप भुजीका एक युवा मनोज सुनुवारले आइतवार फेसबुकमा टिप्पणी गर्दै भनेका छन्–अपरेश सक्सेस,प्यासेन्ट डेथ’ ।
साँच्चैनै बामदेव र नारायणकाजीको अथक प्रयासले बामपन्थी एकताको अप्रेशन चुनावी नतिजामार्फत सफल भएको छ । बामदेव र नारायणकाजीको भने मिसन सफल भयो तर उनीहरु चुनावी मिसनमा भने असफल भए ।
भलै यो एकताको सूत्रधारमा पछिल्लो समयका निर्णायक कडी एमालेका बिष्णु पौडेल र माओवादीका जनार्दन शर्माले सहज जित निकालेका छन् । बाबदेव र नारायणकाजीको पराजयलाई लिएर एमाले र माओवादी दुवै पार्टीभित्र समिक्षा शुरु भइसकेको छ । उनीहरुको पराजयमा अन्तरघातको गन्ध खोज्न थालिएको छ तर पराजित नेताहरुले मुख खोलेका छैनन् ।
डा.बाबुराम भट्टराईसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण नारायणकाजीको जितबारे चुनावअघि धेरै आशंकाहरु थिए । तर बामदेव गौतमको पराजय कसैले सोचेका थिएनन् । स्थानीय तहको परिणामलाई हेर्दा बर्दिया १ मा कांग्रेसभन्दा बाम गठबन्धनको मत २० हजार भन्दा बढी थियो ।
यसअघि जितेको प्युठान छाडेर,आफूले जितेर छाडेको बर्दिया गएका बामदेवको पराजयका बिभिन्न पाटाहरुको बारेमा समिक्षा गरिहाल्ने बेला भइसकेको छैन,तत्कालका लागि वाम गठबन्धनका एक मुख्य डिजाइनर पराजित भएका छन् । उनको पराजयले एमालेभित्र ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ बरियताक्रमका हिसाबले माओवादीमा प्रचण्डपछिका दोस्रो नेता हुन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न निरन्तर अगुवाई गरिरहेका श्रेष्ठको राजनीतिक जीवनमा यो दोस्रो पराजयले ठूला धक्का लागेको छ । श्रेष्ठ २०७० को संविधानसभा चुनावमा पनि मकवानपुर २ बाट पराजित भएका थिए ।
नारायणकाजीको पराजय उनका लागि यसकारण पनि पीडादायी बन्यो कि,उनले बाबुरामसँग पराजय भोगे । गोरखा २ मा माओवादीले नछाडेकै कारण बाबुराम भट्टराई बामपन्थी गठबन्धनबाट बाहिरिए कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा पुगे । नारायणकाजीकै कारण बाबुराम बाहिरिएको आरोप लाग्यो । अन्ततः बाबुरामसँगै पराजित हुँदा धेरै प्रश्न उठेका छन् ।
बामदेव गौतम एमालेभित्र बरियताका हिसाबले केपी ओली,झलनाथ खनाल र माधव नेपालपछि चौथो बरियतामा रहे पनि राजनीतिक हिसाबले ओलीपछिका नेता हुन् । केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेता,पार्टी अध्यक्ष,प्रधानमन्त्री हुँदै वामपन्थी गठबन्धनको शीर्ष नेता बनाउन बामदेवको निर्णायक भूमिका रह्यो ।
पार्टीभित्र बामदेवको प्रभाव नवौं महाधिवेशनपछि एकाएक बढ्दै गएको बेला अप्रत्याशीत पराजयले ठूलो धक्का लगाएको छ । उमेरले ७० भइसकेका गौतम ५ वर्षका लागि संसदीय राजनीतिबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था चानचुने होइन । उनी गठबन्धनभित्र कुनैपनि बेला प्रधानमन्त्रीका समेत दाबेदार हुन सक्थे ।
वाम एकताका लागि फुर्सद
संसदीय चुनावमा असफल भए पनि बामदेव र नारायणकाजीको काँधमा बामपन्थी गठबन्धनलाई पार्टी एकतासम्मको सफलतामा पु¥याउनुपर्ने दायित्व छ । सम्भवतः अब यी दुई नेता पराजयको आन्तरिक कारण खोतलेर घाउ कोट्याउने भन्दा अहिलेको चुनावी गठबन्धनलाई एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा लैजान झन् क्रियाशील हुनेछन् ।
संसदीय मोर्चामा उनीहरुले भोगेको असफलताले पार्टी एकताको सांगठानिक मोर्चामा सम्पूर्ण रुपमा क्रियाशील हुन उनीहरुलाई प्रशस्त समय उपलव्ध भएको छ । यदि एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने सफलता मिल्यो भने उनीहरुको लागि अहिलेको पराजयमा मल्हमपट्टी हुनेछ ।
किनकी पराजय आबधिक हुन्छ,तर पार्टी एकता दीर्घकालिन हुनसक्छ । त्यसैले यो पराजयलाई दुवै पार्टीले नकारात्मक रुपमा भने पनि अर्को अवसरका रुपमा लिनु बाहेक अरु उपाय छैन ।